Sarimihetsika efatra hijerena ny Netflix amin'ity sabotsy mangatsiaka amin'ny volana Janoary | Vaovao momba ny gadget
Sarimihetsika efatra hijerena ny Netflix amin'ity sabotsy mangatsiaka amin'ny volana Janoary ity
Miguel Hernandez | | Sarimihetsika sy andian-tantara, General, About us
Onja mangatsiaka polar? Mandeha amin'ny mafana aho, miaraka amin'i Netflix sy ny oloko. Raha fintinina, ny hatsiaka dia manapaka ny arabe mifototra amin'ny lanezy sy ny ranomandry, ankoatr'izay, tsy misy te-hivoaka amin'izao fotoana amin'ny taona izao. Raha ampidirintsika amin'ity ny tampon'ny volana Janoary, dia tsy mila famporisihana bebe kokoa handany tolakandro iray manontolo hijerena ireo sarimihetsika Netflix ao ambanin'ny lamba firaketanay ankafizinay. Mazava ho azy, araraoty ny fotoana hankanesana any amin'ny supermarket atokisana hahazoana famatsiana amin'ny endrika sakafon-tsakafo sy zava-pisotro malefaka. Hasehonay anao ny sarimihetsika mahafinaritra efatra handanianao amin'ity sabotsy mangatsiaka asabotsy ity ao amin'ny Netflix. Raha tsy manana Netflix ianao dia afaka mitsidika ny pejy tsara indrindra hijerena sinema an-tserasera.
3 Super Size Me (fanadihadiana)
Ny famongorana ny zanak'olombelona dia mitaky antsika. Hahatonga anao hieritreritra tsy misy hafa ity tantara ity, izay mamoaka hevitra tsara maro mandritra ny 2014, hitantsika ireo mpilalao voatanisa toa an'i Anne Hathaway, Michael Ciane ary Matthew McConaughey. Iray amin'ireo sarimihetsika ankafizin'ny mpamaky maro anay izany, ary hitanao anio tolakandro ao amin'ny Netflix.
Avy amin'ny tanan'i Jennifer López no hiainantsika ity tantara mampiahiahy, fitiavana ary teti-dratsy psychopathic ity. Sarimihetsika izay na dia tsy ny tsara indrindra azontsika jerena ao amin'ny Netflix aza, farafaharatsiny azo jerena ary tsy hankarary ny tolakandrontsika io. Ankafizo ity sarimihetsika mampihetsi-po sy ara-nofo ity.
Super Size Me (fanadihadiana)
Amin'ity tranga ity dia hanome soso-kevitra koa izahay fanadihadiana. Amin'ity tranga ity, Morgan Spurlock, feno resabe ao amin'ny trano fisakafoanana amerikana, dia ny fanaovana fitsapana mahaliana izay tsy maintsy ihinanana "sakafo haingana" ary hahitana ny fiantraikan'izany amin'ny fahasalamany. Mahagaga ny valiny, ary hanaisotra ny fanirianao hiverina any amin'ny franchise toa ny McDonalds na Burger King, miankina amin'ny fanirianao daholo izany.
Amerikanina kilasika, vola, tsiambaratelo, hetsika ary famadihana. Sarimihetsika tamin'ny 1987 niaraka tamin'ny mpilalao toa an'i Michael Douglas sy Charlie Seen. Aza adino izany, satria ho tianao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Sarimihetsika efatra hijerena ny Netflix amin'ity sabotsy mangatsiaka amin'ny volana Janoary ity
Natsahatry ny Sony ny fanavaozana Android Nougat ao amin'ny Xperia Z5
Ny Virtual Reality amin'ny Nintendo Switch dia mamoaka hadalana amin'ny Internet